Sarimihetsika – Out linemovies: hivoaka rahampitso ny “Tsiafajavona” - ewa.mg
Sarimihetsika – Out linemovies: hivoaka rahampitso ny “Tsiafajavona”
News - Sarimihetsika – Out linemovies: hivoaka rahampitso ny “Tsiafajavona”
Hivoaka, rahampitso talata 6
oktobra, manerana ny Nosy ny « Tsiafajavona ». Sarimihetsika
novokarin’ny Out linemovies, tao aorian’i “Be sy Lipo”. Tantara
natao ho an’ny rehetra izy ity, mifono anatra sy lesona ary
trangam-piarahamonina amin’ny endriny samihafa. Ao anatin’izany ny
mampitebiteby sy ny mahatsikaiky, sns. Maro ireo mpilalao sangany
eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika malagasy no hamelona ny
“Tsiafajavona”. Sarimihetsika tsy latsa-danja amin’ireo efa nivoaka
hatramin’izay izy ity raha ny fanomanana sy ny fanatontosana azy,
araka ny filazan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Out
Fantatra fa efa eo am-panomanana
sarimihetsika hafa indray, ankoatra ny Tsiafajavona, ankehitriny ry
zareo. Mampanantena zavatra vaovao sy miavaka hatrany ny Out
linemovies hanomezana fahafaham-po sy fahafinaretana ary ny mahasoa
ho an’ny rehetra mpankafy ny sarimihetsika malagasy.
L’article Sarimihetsika – Out linemovies: hivoaka rahampitso ny “Tsiafajavona” a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 05/10/2020
Kolontsaina malagasy: mila iainana ny fifanampiana
Tsy zava-baovao ho an’ny Malagasy ny mifanampy ! Manamafy izany ireo ohabolana sy ohapitenena samihafa : «Trano atsimo sy avaratra, izay tsy mahalen-kialofana», «Ny firaisan-kina no hery», «Raha nanao no tsy nambinina, ampisambory fa havan’ory», sns. Saingy, tao anatin’ny fotoana naharitra, toa mitady hahazo «daty» manokana ny fanatanterahin’ny Malagasy izany. Anisan’izany, ohatra, ny 25 desambra hankalazana ny Noely. Amin’io andro io vao tazana etsy sy eroa ireo manan-katolotra manome fa­nampiana ireo sahirana. Tsy ratsy akory ny manao tahaka izany, fa ilaina ihany koa ny manasongadina sy miaina ny kolontsaina ma­lagasy. Hantsana lalina be ankehitriny ny manasaraka ny Malagasy manan-katao sy ny sarababembahoaka. Toa tsy tazana intsony ilay fifanampiana. Toa tsy hita intsony ilay fifampitsinjovana eo amin’ny mpiara-monina, sns. Miankina amin’ny tsirairay ny famerenana ny fiainana indray ny kolontsaina sy ny fahendrena malagasy… Mety mbola ho tafaverina ve anefa izany ?HaRy RazafindrakotoL’article Kolontsaina malagasy: mila iainana ny fifanampiana a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Telma coupe de Madagascar»: hiavaka tsy ho toy ny mahazatra ny famaranana
Nanome toky ny mpitia baolina kitra ny filoha lefitra faharoa eo anivon’ny federasiona malagasy ny baolina kitra, Andriamanampisoa Alfred fa hiavaka ny famaranana ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara “Telma coupe”, taranja baolina kitra.Araka ny fampahafantarana nataon’ny federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF) sy ny orinasan-tserasera Telma, hampiantrano ny famaranana ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, ny alahady 8 aogositra ho avy izao ny kianja Barikadimy Toamasina. Nolazain’Andriamanampisoa Alfred, filoha lefitra faharoa ny federasioan malagasy (FMF), tamin’ny tamin’ny mpanao gazety, tetsy Isoraka, omaly fa hiavaka tsy ho toy ny mahazatra ny famaranana, hifanandrinan’ny CFFA sy ny CS-DFC. Anisan’izany ny eo amin’ny lafiny fikarakarana, izay ho matihanina tanteraka, ny lelavola omena ny ekipa mpandresy sy ireo mendrika rehetra.Hisy lamina manokana ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ho an’ireo mpijery ho tonga hanatrika izany famaranana izany, izay voafetra ho 400 ihany. Nohararaotiny ihany koa ny niresaka ny lisitry ny Barea de Madagascar, hiandrasana ny fandefasan’ny mpanazatra, i Eric Rabe izany atsy ho atsy sy ny ho fandaharam-potoana, amin’ny fanomanantena. Raha tsiahivina, handray an’i Benin etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina ny Barea de Madagascar, ny 4 septambra ho avy izao, eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Mondial 2022”.Ankoatra izay, mbola andrasana ihany koa izay ho marika vaovao amin’ny fanamiana hoentin’ny ekipam-pirenena malagasy, miatrika ireo fifaninanana rehetra.“Fair-play”Naneho ny heviny ihany koa Andriamanampisoa mikasika ny zava-nisy nandritra ny lalao manasa-dalana, notanterahina ny alarobia lasa teo. Raha tsiahivina, nisy ireo andian’olona nanao fandrahonana sy nikasa hanakorontana tao anaty kianja ka saika nisian’ny fifampikasihan-tanana, teo amin’ny mpomba ny Elgeco Plus sy ny CFFA. Nambarany fa tokony ho nisy “fair-play” nasehon’ireo tomponandraikitry ny CFFA na dia ny fanomezana maimaim-poana ny kianja Elgeco Plus nanaovan’izy ireo fanazarantena ihany aza. “Lalanam-baolina ny faharesena ka na teo aza ireny tranga nampalahelo ireny, vonona hanampy ny baolina kitra hatrany ny tenany”, hoy izy. Tompondaka L’article Kitra – «Telma coupe de Madagascar»: hiavaka tsy ho toy ny mahazatra ny famaranana a été récupéré chez Newsmada.
« Notazomina avy hatrany teny amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo ary nanokafana fanadihadiana », raha araka ny tatitry ny polisy. Tetsy Besarety omaly io afrikana io no saron’ny polisy tsy nanao aron-tava, ary dia notenenina am-panajana sy nentanina mba hametraka izany fitaovana izany ho fiarovana ny ainy amin’ny valanaretina Covid-19. Toy ny olon-drehetra tsy nanara-dalàna ihany koa, dia natolotra azy ny fitaovana hanaovana ny asa iombonana. « Tabataba sy fanesoana ireo polisy no valin’izany, nanohitra hatramin’ny farany ilay famafana lalàna ilay teratany vahiny. Voatery nitondra azy ho eny amin’ny kaomisaria ny polisy » raha araka ny fanampim-panazavana. Tsy vita teo ny raharaha, satria mbola nanapa-kevitry ny nampiasa hery indray ilay olona nosamborina, ary dia voatery nofehezina. Vokatr’izany, dia mbola nitombo indray izany ny fandikan-dalàna izay hahafahan’ny polisy manenjika azy. D.R L’article Besarety : Afrikana tsy nety nanao aron-tava, nosamborina est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Besarety : Afrikana tsy nety nanao aron-tava, nosamborina a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nijery ny zava-misy amin’ny sekoly tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Sahondrarimalala Marie Michelle, nanomboka tamin’ny faran’ny herinandro teo. Handalo distrika maro anyAtsimo Andrefana , Anosy, Androy ary Ihorombe izy mandritra izao fidinana ifotony izao. Tao amin’ny distrikan’i Morombe no nisantarany ny fihaonany tamin’ireo tompon’andraikitry ny fanabeazana any amin’ny fitaleavam-paritra Atsimo Andrefana ho fanatanterahana ny torolalana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika. Nandritra ny fivoriana araka asa no nampahafantarana tamin’ny lehiben’ny Fari-piadidiam-pampianarana, ny sefo ZAP, ny mpitantana ny Farimbon’ezaka ho fahombiazan’ny fanabeazana eny ifotony na Feffi ary ny solontenan’ny Fram ny asa miandry, dia ny fanabeazana tsara kalitao ho an’ny rehetra. “Samy manana anjara andraikitra sy adidy daholo ireo mpisehatra amin’ny fanabeazana, indrindra ny eny ifotony”, hoy ny minisitra. Nasian-teny ny fijerena ny fanatsarana ny fitantanana, ny fampitaovana sy ny rafi-pitantanana ao amin’ny minisitera, famatsiana fitaovana sy vola ny sekoly (ny caisse école sy ny caisse de soutien, cantines scolaires) izay halefa any amin’ny Feffi, ny fanampiana isaky ny roa volana, ny “vacations”, ny fitantanana ny olona. Tafiditra tao anatin’ny fivoriana arahina asa ny fandraisana ireo mpampianatra Fram, fandraisana be taona miisa eo amin’ny dimampolo sy sivinjato manerana ny Nosy amin’ity taona ity ary ny fizarana ny taratasy fifanarahana araka asa andiany fahafito sy fahavalo. Isan’ny nisitraka izany ireo mpampianatra Fram dimampolo tany amin’ny distrikan’i Morombe. Tsy nitondra tanam-polo anefa ny minisitra Sahondrarimalala Marie Michelle fa nanome fitaovam-pianarana ho an’ireo mpianatra: kapa ary aron’akanjo. Teo ihany koa ny fanolorana seza sy latabatra natokana ho an’ny kilasy efatra tao amin’ny EPP Tsinjorano Morombe ary tablety dimampolo ho an’ny CEG Jefson Jean Jonasy Morombe. L’article Fanatsarana fanabeazana :: Nojerena manokana ny fampianarana any Atsimo Andrefana est apparu en premier sur AoRaha.
Antanimora: namono tena tamin’ny sotrobe ilay gadra
Tsy mbola nisy naka hatramin’izao ny vata-mangatsiakan’ilay voafonja maty namono tena tao amin’ny fonjan’Antanimora, afakomaly. Efa nampandrenesina ny vaovao ireo fianakaviany, saingy tsy mbola tonga naka ny razana. Hisy ny « autopsie » atao mahakasika aminy. “Raha mbola tsy misy maka ny razana, halevina ao amin’ny fasan’ireo gadra eny Tsiafahy”, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Tsiahivina fa voafonja tao Antanimora ralehilahy, saingy nisy raharaha vaovao momba ny fakana an-keriny mahavoarohirohy azy. Vokany, voatazona vonjimaika am-ponja indray ny tenany. Nisy anefa ny didy navoakan’ny fampanoavana amin’ny famindrana azy eny amin’ny fonjan’i Tsiafahy. Taorian’izay, tonga teny amin’ny fonjan’Antanimora ireo mpiasan’ny fonjan’i Tsiafahy haka azy. Araka izany, nandamina ireo entany ralehilahy ka namonjy ny toeram-pidiovana. Norangitiny tamin’izany anefa ny sotrobe iray ka nanindronany ny tendany. Nandriaka tanteraka ny ra ary mbola nentina namonjy ny hopitalin’ny HJRA izy, saingy tsy tana ny ainy. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy fantatra mazava ny mombamomba ilay voafonja maty. Voalaza kosa fa avy any amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana izy. Henintsoa HaniL’article Antanimora: namono tena tamin’ny sotrobe ilay gadra a été récupéré chez Newsmada.
Ce n’est plus un confinement strict qui est maintenant vécu par les Malgaches, mais on serait tenté de parler de déconfinement partiel car on sent un véritable vent de liberté régner dans la région d’Analamanga. Avec l’ouverture progressive des marchés en semaine, on voit que la population retrouve petit à petit sa vie d’avant. Les citoyens qui ont, longtemps, été confinés ont envie de s’évader comme le montre la prise d’assaut des cars des compagnies de transport régional. Les autorités sanitaires ont tôt fait de rappeler que la lutte contre la Covid-19 n’est pas terminée et que les règles qu’elles édictent doivent toujours être respectées. Des règles à respecter : malgré un vent de liberté Les décès de la Covid-19 sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas tirés d’affaires. Les responsables de cette lutte restent circonspects, même si le chef de l’État fait preuve d’un certain optimisme. Certains CTC-19 ont fermé car le nombre de patients à traiter a diminué, mais le nombre de formes graves est préoccupant. L’accélération de la campagne de vaccination est, cependant, un signe positif. Les files qui se sont formées devant les vaccinodromes montrent qu’il existe une envie forte de se prémunir contre le virus, mais l’objectif d’utilisation des 250.000 doses ne sera pas atteint. L’État, en desserrant petit à petit la vis, espère une reprise des activités économiques. Les liaisons aériennes intérieures vont reprendre. Les vols extérieurs sont encore suspendus, mais les opérateurs du secteur touristique espèrent leur ouverture prochainement. Leur optimisme est raisonné car ils se pressent dans les centres de vaccination pour recevoir leur précieuse dose. Cette première semaine du mois de juin est moins oppressante que celles qui l’ont précédée, mais il y a encore beaucoup d’étapes à franchir pour retrouver une vie vraiment normale. Patrice RABE L’article Des règles à respecter : malgré un vent de liberté est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Des règles à respecter : malgré un vent de liberté a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Harena an-kibon’ny tany: miandrandra vahaolana…
Velon-taraina. “Maro ireo tsy anasa mirona amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany mba hivelomana. Voasakantsakana koa ity sehatra ity ary tsy misy ny vahaolana matotra”, hoy ny solontenan’izy ireo avy amin’ny faritra rehetra, Randrianomenjanahary Paul Fils, tetsy 67 ha, omaly. Nanteriny fa tokony hohamoraina ireo dingana samihafa amin’io sehatra io : hetra, antontan-taratasy samihafa isorohana ny kolikoly…Eo koa ny tsy mbola nisehoan’ny volavolan-dalàna mifehy izany seha-pihariana izany. “Tsy miditra resaka politika izahay fa miteny noho ny olana eo amin’io fitrandrahana io”, hoy ihany izy ireo. Nambaran’izy ireo fa anisan’ny tokony hahavaha izany rehetra izany ny minisitra notendrena teo noho ny traikefany sy ny fandaharanasany. Azo esorina rehefa tsy mahomby. “Afaka hitondra vahaolana sy fampandrosoana ity seha-pihariana ity, ho an’ny vahoaka sy ny firenena izy”, hoy ihany izy ireo.Synèse R.L’article Harena an-kibon’ny tany: miandrandra vahaolana… a été récupéré chez Newsmada.